Ndezvipi Famous Uye Historical Train Routes | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > Ndezvipi Famous Uye Historical Train Routes
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Famba Europe
The whooshing ruzha chitima richiswedera kuva chiteshi, uye tinogona kutanga uye kuenda kumwe zvisingatarisirwi zvachose. Ungafunga makanaka kupfuura Famous uye Historical Train Routes?
Zvitima muri chiyeuchidzo Golden Age okufamba. Kana vanhu vakaenda kwemwedzi panguva uye mabhiza zvimwe zvinobatanidzwa. Travel haana pamusoro pakarepo uye chete vachitarisira kuenda.
Aihwa, kufamba raireva vachinakidzwa rwendo. Kurongedza mu hunde dzacho, uye zvimwe kambasi uye akawanda mepu zvakanaka. Travel zvaireva kuenda kunzvimbo waiziva hapana, apo kunyange mhepo ainzwa chinoshamisa uye wako musha tsamba kuti chete kusvika pashure rwenyu ngarudzokere.
Mukukudza chimiro rinonyatsogutsa chokufambisa, Save A Train akusvitsa pasi Famous uye nhoroondo chitima pakutengeserana unofanira kutora 2019!
London kuna Venice pamusoro dzokumabvazuva Express – Iyo Yakarebesa Yakakurumbira uye Nhoroondo Yezvitima Nzira
Izvi zvichaita zvamazvirokwazvo kaviri kuva zuva rinokosha! Iyi ingangodaro inonyanya kuzivikanwa uye Nhoroondo Yezvitima Nzira uye a da chitima nzira munyika. It ngaubve Paris ari kuenda Byzantine kuguta Istanbul. Unogona Pakazosvika mureza tikiti kubva SaveATrain kufamba nzira iyi, kana vasarudze zvikuru fadza tsanangudzo uye kusvetukira pamusoro Dzokumabvazuva Express. The chivande uyu hwomutambarakede chitima chakanga famously akafuridzirwa Agatha Christie. Mazuva ano haichaitwa operative wayo yepakutanga chimiro asi mweya wayo mupenyu muna Belmond raMwari Venice-Simplon Dzokumabvazuva Express. Kune nezvitima maviri, saizvozvo, mumwe chete nengoro kudanana kubva 1920s uye 30s uye mumwe usingakanganwiki British Pullman chitima.
The itsva nzira mhepo nzira yaro kubva London kuna Venice, pachiitiko kusanganisira zvimwe dzokugara mu Europe, uye kamwe chete pagore chepakutanga Paris-Istanbul rwendo muna August.
Milan kuenda kuVenice Chitiketi matiketi
Florence kuenda kuVenice Chitiketi matiketi
Bologna kuenda kuVenice Chitiketi matiketi
Roma kuenda kuVenice Chitiketi matiketi
Hamburg kuna Copenhagen
Unofanira afambe pamusoro chitima kuti inogona kuendeswa pamusoro chikepe. Zvechokwadi ichi ndechimwe Famous uye nhoroondo chitima yenzira munofanira kutora 2019!
saka, chii chinoitika kamwe iwe kuenda Ferry? Sezvineiwo chitima vakatakurwa vanokwanisa kuwana chitima uye kunakidzwa girl kamwe mune chikepe. Uchaita kuyambuka Baltic gungwa mu 45 maminitsi. The yose chitima Rwendo kwazvinogumira 4 maawa uye 45 maminitsi. Copenhagen rayo rye yakazaruka-faced sandwiches uye incredible magadzirirwo aesthetic chinhu anonzwisisa chitima tikiti kubva raitangira Hamburg, Jerimani kuti iwe unogona Chokwadi, kutenga kubva kwatiri, uchava bhatani pakupera ichi Blog romukova.
Unobva vaviri Switzerland vanofanira yevedza gomo plesieroorde, Zermatt uye St Moritz, ari Glacier Express ndiyo chinozorodza nzira yokunakidzwa hunoshamisa girl of Swiss Alps. Sei vakasarudza ichi somumwe kupfuura Famous uye nhoroondo chitima yenzira munofanira kutora 2019?
Vatariri kumabvazuva kubva Zermatt, Zuva-refu rwendo cover 91 tunnels uye 291 mabhiriji sezvo akakungurutsa wokumaodzanyemba kare kuti Switzerland YOMUMAKOMO Mafuro, pristine madhamu gomo, uye mufananidzo-vakakwana nemisha. Zvimwe rwendo vanosanganisira Oberalp Pass, wepamusorosoro pfungwa pamusoro motokari panguva 6706 tsoka. Chimwe ndicho yakakurumbira Landwasser Viaduct - munhu zvikuru-Arch matanhatu mamiriro yakamira 200 tsoka uye chubvu kuva tanera gura ngaatarire kupinda megomo.
Interlaken kuna Zermatt Zvitima
Lucerne kuenda kuZermatt Chitiketi matiketi
West Highland Line, Glasgow kuna Mallaig - Scotland
tiri isu Parizvino muropa kuti yepaTV Outlander, rinotaura akare-kuchikoro Scotland Highlanders. Saka hapana hazvishamisi uyu pandandanda Famous uye Historical Train Routes. The West Highland Line ndiyo nzira yakanakisisa zvikuru munyika dzomusango, Mahombekombe. Pakangotanga chitima kunosiya Glasgow - zvikuru guta Scotland racho - mumaguta nzvimbo nokukurumidza anokundwa yakasvibirira glens uye wakagadzikana lochs. vakananga kuchamhembe, kuWest Highland Line ichipfuura kure murenje Rannoch Frizington. Zvino inopfuura kuti chirefu Ben Nevis, unobata pasi Fort William. Achitaurazve mirayiridzo uye kutamira kumadokero, chitima traverses ari Glenfinnan Viaduct (dzaishandiswa mune Harry Potter firimu mudungwe) vasati vasvika panguva rine bishi chengarava Mallaig.
Amsterdam kuenda kuLondon Tiketi matikiti
Lyon kuenda kuLondon Tiketi matikiti
Famous uye Historical Dzidzisai Routes mu England
Passenger njanji pakufamba mumwe mukuru British mipiro pamusoro Victorian Age. Muzana remakore rechi20, njanji nechido uye njanji hobbyists sokuti dzinowanda sokuti zvokudya munjanji pachavo. Historic hwemvura nezvitima, chinokosha yevedza nzendo, uye yakamanikana Gauge railways yadzorerwa. pano, muchawana yakanakisisa hwemvura chitima uye nhaka njanji nzendo. Kuvawana vari West Country mumaruwa ose Cornwall, Devon, Somerset, uye Dorset.
Sezvo vazhinji nezvitima izvi zviri kudzosera chiutsi nezvitima, Save A Train haripi matikiti pamusoro pavo. zvisinei, tinoita anopa yakanakisisa mutengo nokuti kusvika uye kubva nyika dzakabatana.
Unoda kuona Famous uye nhoroondo chitima pakutengeserana?
Musoro pamusoro kuti Chengetedza Chitima uye bhuku tikiti kwako 3 maminitsi.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / kuti ru to / kes kana / of uye mimwe mitauro.
#wakakurumbira	#Dzidzo Dzakakurumbira	#HistoricTrains	europetravel	longtrainjourneys	Chiteshi chechitima	chitima mazano	Train Travel